Wiricheya Inowanikwa Bathroom - Dzorerazve Chimbuzi
Uri kufunga nezvekugadzirisa imba yako yekugezera kuti ugare pawiricheya kufambidzana munhu? Kana iwe unogona kunge uri kugadzira iyo kufambidzana imba yekugezera munzvimbo nyowani. Chero nzira, matipi anotevera anouya anobatsira mudanho rekugadzira uye anokuchengetedza iwe kutemwa nemusoro mushure meizvozvo. Nezvinangwa zvechinyorwa chino isu tichafungidzira iyo yakasara yeimba iri kufambidzana uye isu tichava takanangana nekugezera chete.
Akaremara kufambidzana dzimba dzekugezera dzinofanira kubvumidza iwo mwero mumwe (pasina matanho kana zvimwe zvipingamupinyi), wiricheya ushamwari nyore kupinda uye kubuda. Saizi yakanaka yekupinda musuwo wechigaro chevhiri kufambidzana imba yekugezera iri 36 ″. Zvinogona kunge zvisingaite kutakura saizi iyi asi haufanire kuenda pazasi pe32 ″, zvikasadaro zvinobva zvaita zvisingaite. Ungangoda kufunga kushandisa muhomwe kana kutsvedza masuo. Kana iwe uchifanira kushandisa chinyakare musuwo shuwa mabato akaverengerwa kuitira nyore kushandisa.
Kune chimbuzi pachacho, chengeta mupfungwa zvinhu zviviri: kureba uye chimiro. Chigaro che chimbuzi chinofanirwa kunge chiri cheya kukwirira (18 ″) uye chinofanirwa kuve nembiya yakaita oval. Mabhawa ekubata zvakare anofanirwa uye anozofanira kunyatsoiswa kuti atsigire huremu hwakawedzera. Kumwe kusimbiswa kwemadziro kunogona kudikanwa kune ino nhanho.
Dzorera Around Space
A wiricheya inoda pasingasviki 48 ″ kutendeuka nzvimbo uye nemwero iri 60 ″. Chinhu chakakosha zvakanyanya hupamhi kana nzvimbo pamberi pesingi uye chimbuzi, icho chinoda kuve makumi matanhatu neshanu. Mabhawa anobata anofanirwa kuve pamadziro imwechete padyo nechimbuzi kuti munhu azvisimudze.
For a wiricheya mushandisi, singi pakukwirira kwe 30 - 34 inches inokodzera. Uye zvakare, ye wiricheya vanoshandisa nzvimbo iri pasi pekushambidza inodiwa. Pakadaro munhu mu wiricheya inogona kukwira kusvika pasingi. Uyezve funga kushandisa levers pamapombi anopisa uye anotonhora-emvura, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuvhura uye kudzima.
Kugeza / Kugeza Nzvimbo
Avhareji yekugezera ine zvakawanda zvinovhiringidza iyo Akaremara mushandisi. Pane sarudzo shoma dzekukunda zvipingaidzo izvi. Kana iyo wiricheya mushandisi ari kuzoshandisa iyo tub sarudzo, ipapo chishandiso kusimudza uye kudzikisa munhu wacho achazodiwa. Izvi zvinofanirwa kuve zvakagadzirwa zvakafanira uye zvakagadzirwa.
Roll-in showers zvakare sarudzo, apo munhu anogona kupinda mushower mune wiricheya. Chigaro chakapetwa-pasi chinodikanwa pane iyi sarudzo uye sezvakakurukurwa pamberi pekumiswa kwakakodzera kwemabhawa ekubata kuchazodiwa.
Kumwe kufunga uye kufunga kunofanirwa kupihwa kune iko kuiswa kwemwenje switch uye magetsi magetsi. Shanduko INOFANIRA kunge iri nyore kufambidzana kureba. Chimbofunga izvi kushandisa fluorescent mwenje mababu kana ma LED ehupenyu hwakareba seiyo wiricheya akasungwa munhu ari kuzoda rubatsiro mukuchinja mababu.
Kana zvasvika pakugadziridza kana kugadzira ye wiricheya kufambidzana imba yekugezera, iwo matipi ari pamusoro achapa imwe nhungamiro mukuwana mhedzisiro yaunoda. Ndinovimba wawana izvi zvichibatsira.